Hooyo gabadheeda uga tagtay Warqad dardaaran ah oo ay dad badan la qiiroodeen – Filimside.net
March 11, 2019 Jabriil Abdikadir
Gabadh da’yar ayaa la wadaagtay bulshada warqad qalbiga taabanysa oo ay u qortay hooyadeed ka hor inta aysan dhiman.
Warqadan qiirada leh ayaa ku bilaabatay : “Hannah,haddii aad aqrinaysid warqadan markaas qalliinka ma guulaysan,waan ka xumahay waan isku dayay in an ka guulaysto cudurkan balse alle ayaa ii haya wax kale oo aan sameeyo.”
“U Samir aabahaa,taasi waxa ay noqon doontaa mid ku adag isaga waxa uuna u baahnaan doonaan waqti .”ayay ku tiri warqada.
Peggy ayaa sidoo kale gabadheeda u sheegtay: “U sheeg qof waliba in aad jeceshahay.
“Ku raaxiso noolsha,maalin walibana ku xisaabtam sidii in ay tahay maalinkaagii ugu dambeeyay sababtoo ah ma jirto cid inaga mid ah oo og in maanta ay tahay maalinkii ugu dambeysay noolashiisa.”ayay tiri Peggy .
Hannah ayaa BBC u sheegtay in aqrinta warqadani ay ahayd mid aad u adag : “waxa aan dhammaanteen aqrinay habeenkii ay hooyo dhimatay ,waxa ayna ahayd mid qiiro leh” ayay tiri.
Waxaa Aqrisay 459